ALAKAMISY 20 JANOARY - ALAROBIA 26 JANOARY 2022
MINISITERAN’NY ASAM-PANJAKANA : Hamafisina ny fanakaikaizana ny mpiasa
Ho fanamafisana ny fanakaikaizana ny mpiasam-panjakana aty amin’ny Faritra, tafiditra anatin’ny fandaharanasan’ny minisiteran’ny Asam-panjakana sy ny asa, ary ny lalàna sosialy, misy ny atrikasa fampiofanana sy fikirakirana ny antontan-taratasim-panjakana, taty Toamasina. 17 avril 2015
Miditra amin’ny fanavaozana ny asam-panjakana ny minisitera amin’izao fotoana izao, araka ny tanjona napetraky ny minisitra Maharante Jean de Dieu.
Fantatra fa mbola maro ireo vary mangatsiaka amin’ny fikirakirana ny antontan-taratasim-panjakana, ka ny hanarina izany no ezaka ataon’ny minisitera. Marihina fa haharitra telo andro nanomboka ny alarobia 15 hatramin’ny zoma 17 avrily izao fampiofanana atao izao, ka ry zareo ekipan’ny DRH de l’Etat, ao anatin’ny minisiteran’ny asam-panjakana sy ny asa, ary ny lalàna sosialy foibe, tarihin’ny Tale jeneraly, Razafimandimby Vololonirina Lucie, no manao ny fampiofanana.
Nandritra ireo telo andro ireo ihany koa dia nisy ny “guichet unique” iraisan’ny FOP, ny Finance, ary ny Contrôle financier manatanteraka ao amin’ny efitrano malalaky ny Lapan’ny tanàna, Toamasina renivohitra. Ny minisitra Maharante Jean de Dieu no ho tonga hamarana amin’ny fomba ofisialy izao atrikasa manakaiky ny faritra izao, ny zoma 17 avrily 2015, ary hifanakalo hevitra amin’ireo mpiatrika ny atrikasa.
ALAKAMISY 20 JANOARY - ALAROBIA 26 JANOARY 2022 (0) 20 janvier 2022 “Tsy maintsy arenina Andekaleka, fandoroana niniana natao no niteraka fahatapahan-jiro goavana” FIDINANA IFOTONY NATAON’NY FILOHA RAJOELINA (0) 20 janvier 2022 Mpitsabo maty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana FANAFIHANA TAO AVARADRANO (0) 20 janvier 2022 Tafakatra 10 tapitrisa dolara isan-taona ny fatiantoka noho ny fitohanana TELEFERIKA (0) 20 janvier 2022 Iray amin’ireo sekoly mpampiofana mpampivelona miisa 101 manerana ny Nosy INSPALMA AMORON’I MANIA (0) 20 janvier 2022 Natolotra ny oniversiten’Antananarivo ny boky « Ny fiandohan’ny Malagasy » FIKAROHANA (0) 20 janvier 2022